Ezona zicelo zisimahla zeWindows | Iindaba zeGajethi
Ezona zixhobo zilungileyo zisimahla zeWindows
UIgnacio Sala | | Izicelo, Windows
I-Windows ibilulwaziso lwayo ngokusesikweni lwenkqubo yokusebenza kwihlabathi lekhompyuter, ngesabelo sentengiso esikufutshane ne-90%. I-10% eseleyo yabiwe yi-Apple's MacOS kunye neLinux. Ukuba nesabelo esikhulu kangako semarike kuthwala umngcipheko, kuba imigewu yenza iWindows ijolise kubo.
Kodwa ayisiyiyo yonke into embi, kuba yeyona nkqubo iphambili yokusebenza emhlabeni, oko kuthetha ukuba sinenani elikhulu lezicelo zazo zonke iintlobo, izicelo esinokuthi senze ngazo yonke into ngaphandle kokuya kwibhokisi ngaphandle ixesha. Apha siyakubonisa ezona zicelo zisimahla zeWindows.
Ezona zixhobo zilungileyo zasimahla zeMac
I-Windows yazisa uGcino lweWindows, ukuze emva koko ithiye igama kwakhona kwiVenkile kaMicrosoft, ene-Windows 8, yiyo loo nto iba yindlela ebalaseleyo kubo bonke abasebenzisi abafuna ukufaka usetyenziso ikhuselekile ngokupheleleyo kwaye ayinalo naluphi na uhlobo lwentsholongwane.
Ingxaki ngezicelo ezikhoyo kule venkile kukuba zilungelelaniswe nomsebenzi wokuchukumisaNokuba isixhobo asixhasi olu hlobo lokufaka, ke inani lezinto onokukhetha kuzo kunye nemisebenzi ekhoyo iyacuthwa.
3 Microsoft Ukwenza
7 Imeyile yaseNewton
Ukuba sihlala sisebenza namaxwebhu okubhaliweyo, iipredishithi kunye nokunikezela, esona sisombululo sisiso ngoku sinaso sibizwa ngokuba yiOfisi. Kwiminyaka embalwa, uMicrosoft usinikeze inkqubo yokubhalisela umsebenzisi indleko zenyanga eziyi-7 zeerandi, ke yamkelekile ngokugqibeleleyo kwaye iya kusivumela ukuba sifumane okuninzi kuyo yonke imisebenzi yayo ukongeza ekunandiseni lonke uhlaziyo ngokusemthethweni.
Nangona kunjalo, ukuba uyayisebenzisa uyenza kancinciUnokukhetha i-LibreOffice, isuti yeofisi esisinika iprosesa yamagama, ispredishithi kunye nesicelo sokwenza intetho. Le seti yezicelo isinika imisebenzi efanayo esisiseko esinokuyifumana kwiLizwi, i-Excel kunye nePowerpoint. Nangona kunjalo, ukuba sifuna imisebenzi ethe kratya, esi ayisosicelo esifunayo.
Ukuba ufuna isidlali sevidiyo ukuba udlale naluphi na uhlobo lwevidiyo kwikhompyuter yakho, ngeVLC akufuneki ujonge phambili. Ayisiyonto yasimahla kuphela, kodwa ikwanayo Ixhasa ikhowudi nganye yevidiyo kunye nevidiyo esetyenziswa kakhulu namhlanje kwintengiso. Ayisiyiyo kuphela ekwaziyo ukudlala iifayile ngaphandle kwifomathi ye-.mkv (iiathrekhi ezininzi zeaudiyo kunye nemibhalo engezantsi), kodwa ikwasivumela ukuba sidlale iifayile zomdali ngeH.265.
Ngelixa uguqulelo olukhoyo kwiVenkile kaMicrosoft luyilelwe nikeza ujongano lokuchukumisaInguqulelo yedesktop ekhoyo kwiwebhusayithi esemthethweni yeVidiyoLan, isinika inani elikhulu lokukhetha, ukhetho njengokuguqula phakathi kweefomathi ezahlukeneyo zevidiyo kunye nezandi. I-VLC yeWindows, kwinguqu yayo epheleleyo, sinako khuphela kwiwebhusayithi esemthethweni yeVidiyoLan.
Xa sicwangcisa kungekuphela nje imisebenzi yethu yasekhaya, kodwa sikwacwangcisa imisebenzi yethu, kufuneka senze isicelo esinaso, Isicelo sasimahla esidibanisa nazo zonke iinkonzo zeMicrosoft, ke ukuba uhlala usebenza neOfisi, nasisicelo osifunayo.
Ukuba awuyenzi, ayonzakalisi ukuyisebenzisa, kuba kuphela kwento yasimahla engafuni naluphi na uhlobo lobhaliso. Ngombulelo kwesi sicelo sinokucwangcisa imisebenzi yethu, enjengeyasekhaya, kunye nokwenza uluhlu lweenkampani, ukuhlela uhambo ... Eyona nto ifunekayo ukuze sikwazi ukuyisebenzisa Microsoft Ukwenza es uneakhawunti yeMicrosoft.
Ukwenza imisebenzi elula ngemifanekiso esiyithandayo, njengokutshintsha ubungakanani kwakhona, ukuyithiya ngokutsha, ukuyiguqulela kwezinye iifomathi, ngumsebenzi olula kakhulu Umbonisi weXn, kwaye inomdla ngakumbi kunesicelo sendalo esisinikwa yiWindows. Esi sicelo iyahambelana neefomathi eziphambili njengeJPEG, TIFF, PNG, GIF, WEBP, PSD, JPEG2000, OpenEXR, camera RAW, HEIC, PDF, DNG kunye neCR2 kwaye ikwasivumela ukuba senze umboniso weefoto zethu ngokungathi yiPowerpoint.
I-Photoshop, njengeWindows, yenye yezona zicelo zindala kwihlabathi lekhompyuter, njengeAutocad. Wonke umntu ufake i-Photoshop ngexesha elithile, uguqulelo ekunokwenzeka ukuba balukhuphele kwiwebhusayithi. Ngokungafumani uhlaziyo, ukuze ube Inguqulelo engekho mthethweni, inyanzela umsebenzisi ukuba aphinde akhuphele iinguqulelo ezintsha, kwaye enze imisebenzi eyimfuneko ukuze asebenze kwakhona, into leyo Iya isiba nzima ngakumbi.
Ukuba ufuna ukulibala ngohlaziyo lwe-Photoshop nayo yonke into eyirhangqileyo kwaye ibandakanya, singasebenzisa I-GIMP, ifoto simahla yeFotohop. Kwaye xa ndisithi i-Photoshop yasimahla, ndiyathetha ukuba esi sicelo sinika imisebenzi efanayo nesinokuyifumana kwisicelo seAdobe, kubandakanya ukubanakho kokufaka izandiso kunye nezongezo ukongeza imisebenzi emitsha kunye neempawu ezongezelelweyo.
Khuphela i-GIMP yeeWindows simahla.
UGoogle usinika inkonzo yokuguqulela simahla ngokupheleleyo, inkonzo nayo idibanisa nakweliphi iphepha lewebhu ukuba sisebenzisa iGoogle Chrome. Nangona kunjalo, xa sifuna ukuguqulela icandelo lesicatshulwa kwaye hayi iphepha elipheleleyo lewebhu, kufuneka uvule isikhangeli kunokuba yingxaki.
Ngethamsanqa, sine-DeepL, inkonzo yokuguqulela esebenzisa ubukrelekrele bokuzenzela ukunikezela iinguqulelo eziyinyani kangangoko kunokwenzeka. Idityaniswe nenkqubo nje ukuba siyifakile, ke xa ucinezela uLawulo + C (amaxesha ama-2) usetyenziso luvula ngokuzenzekelayo ngombhalo okhutshelweyo kwaye uguqulelwe kwisiNgesi (ngokungagqibekanga). Khuphela umguquleli we-DeepL simahla kwiWindows.
Ukuba usetyenziso lweMeyile efakwe ngokwendalo kwiWindows aluhlangabezani neemfuno zakho kwaye awufuni ukusebenzisa inguqulelo yewebhu ye-imeyile, ungazama iNewton Mail, isicelo esidibanisa intengiso kwinguqulelo yasimahla, Intengiso esinokuthi siyiphelise xa sihlawula umrhumo wonyaka we- $ 49,99.
INewton Mail iyahambelana nazo zonke ezona nkonzo zisetyenziswayo ze-imeyile, kubandakanya i-IMAP. Inani lezinto ezikhethiweyo liphezulu kangangokuba ukuba sifuna ukusebenzisa ubuchule, Asisoze sasweleka ekukhetheni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Izicelo » Ezona zixhobo zilungileyo zisimahla zeWindows
Ukuhambisa iifayile phakathi kwe-iPhone kunye ne-Android kulula kakhulu nge-SnapDrop